Posted by: Zakariya in Wararka July 8, 2015	0 238 Views
Waxay intaas ku dartay in ol’oluhu keenay koror dhal-dhedigood aan loo baahneyn oo kusoo shubmay xarumaha agoomaha, hayeeshe waxay tani ku tilmaantay fal-celin quman oo ay ula jeeday inay kasoo hayeemeen “in la uur-xabaalo oo ay ku soo hayaameen in la iska xooro.
Hindiya oo ah dal diin ahaan aaminsan Hinduism-ka oo ah diin loogu magac-daray webiga Indus, ayaa 70% dadkeeda waxaa ragaadiyay aramida xanuunka badan ee lagu hayo dhallaanka gabdhahooda. Mar kasta oo dhal-gabar la uur-xabaaliyana, waallidkii laga beeray wuxuu qalbiga ku qabtaa mahadhada xanuunka leh ee dhashiisii uu uurka ku xabaalay.
Inkasta oo gabdhaha Hindiya badigood la uur-xabaalayo, hadana dowladda Hindiya waxay isku dayaysaa xal badala in loo helo mushkiladan walow dadaal u dhigma diifta haysata dadyowga dhibanaha u noqday caadada ay rumaysan yihiin aysan dowladdu si waafi ah u qaban.
Dhal-dhedigoodka Hindiya waxay waligood eersan doonaan dhedignimadooda. Waxayna had iyo jeer ku hari doonaan hayaanka ay ugu soo jiraan inay ifkan cagaaran kusoo biiraan.
Halka inta si fudud kaga soo baxsata in la uur-xabaalana ay abidkood ku adkaan doonto inay sharaxaan sidii ay ugu dhasheen duni aan looga baahneyn dhalashadooda.